အခန့်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားအသုံးများဖြင့် အီးမေးလ်ရေးသားခြင်း - Myanmar Network
Posted by Language Republic on January 7, 2016 at 11:10 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ များသောအားဖြင့် semi-formal လို့ခေါ်တဲ့ အလွန်ယဉ်ကျေးသောအသုံး နှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးအသုံးကြားက မလျှော့မတင်းလွန်းတဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းများကိုသာ တွင်တွင်သုံးကြပါတယ်။ ခင်မင်ပျူငှါ တဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းများကို ယဉ်ကျေးသောအခန့်သုံး အသုံးအနှုန်း၊ ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံများ ရောနှောပြီးသုံးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်မသိကျွမ်းတဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအဝန်းရဲ့ပြင်ပမှ လူများ၊ အခြားကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်သွယ်ရေးသားမယ်ဆိုရင်တော့ ရုံးဆန်ဆန် အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို သုံးကြပါတယ်။
အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ရေးတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို ကုန်ပစ္စည်းမှာယူ/ဝယ်ယူရာ၊ ကြိုတင်စာရင်းပေးရာ၊ တောင်းပန်ရာ အစရှိတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ သုံးကြပြီး ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းကြီးတချို့မှာတော့ မိမိရဲ့ အထက်ကဖြစ်စေ အောက်ကဖြစ်စေ ရာထူးအဆင့်ကွဲတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (colleague လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ပါတယ်) များထံအီးမေးလ်ပေးပို့ရာမှာ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားသုံးကြပါတယ်။
အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များက သင့်ကို အခန့်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားအသုံးများထဲမှ တချို့ကို ဖော်ထုတ် ခွဲခြား သုံးစွဲနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ်အဖွင့် နဲ့ အပိတ် - Openings and closings
ပုံမှန်သုံးနေကျ အီးမေးလ်အဖွင့် နဲ့ အပိတ်တွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စာရေးသူက အခန့်သုံး သုံးထား မထားကို ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Dear .... အစရှိတဲ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားအပြီးမှာ opening sentences လို့ခေါ်တဲ့ အီးမေးလ်အဖွင့်ဝါကျ လာပါတယ်။ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးထားတဲ့ အီးမေးလ်အဖွင့်ဝါကျ တချို့ကတော့ -
• I hope that all is well with you. (သင်အားလုံးအဆင်ပြေနေသည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်)
• I was just emailing to request some assistance. (အကူအညီတချို့တောင်းခံရန် ကျွန်ုပ် အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်) (ပိုမိုယဉ်ကျေးသည့်ဝါကျဖြစ်စေရန် past continuous tense ကိုသုံးထားသည်ကို သတိပြုမိပါသလား)
• Thank you for your email of 12 March. (သင် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင်ပို့လိုက်သော အီးမေးလ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်)
အထက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်အဖွင့်များကို အစိုးရ နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များကြားရေးတဲ့ အလွန်အလုပ်သဘောဆန်တဲ့ အီးမေးလ်တွေမှာမသုံးပါဘူး။ အကြွေးတောင်းတဲ့စာလိုမျိုးတွေမှာလဲ မသုံးကြပါဘူး။
အတိုသုံးများ - Contractions
အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာအီးမေးလ်တွေမှာ I’m, he’d, you’ll စတဲ့ အတိုသုံးများကိုမသုံးပါဘူး။
အခန့်သုံး - I am writing to ask if you have seen the news from Mr Dalton. (Mr Dalton ထံမှသတင်းကို သင်မြင်ပြီးပါသလား သိလို၍ ကျွန်ုပ် စာပို့ခြင်းဖြစ်သည်)
အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံး (semi-formal)/ အရပ်သုံး - I’m writing to ask if you’ve seen the news from Jo. (ဆိုလိုရင်း မှာအထက်ပါ ဝါကျနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်)
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်း၊ခွင့်ပြုခြင်း စသည်ကိုပြသောကြိယာများ - Modal verbs
ယဉ်ကျေးစွာတောင်းဆိုခြင်း နဲ့ ညွှန်ကြားခြင်းတို့အတွက် would ၊ could အစရှိတဲ့ modal verb တွေကိုသုံးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရင်းနှီးစွာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးရာမှာနဲ့ အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံးတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်း၊ခွင့်ပြုခြင်း စသည်ကိုပြသောကြိယာတွေကို အလားတူသုံးကြပါသေးတယ်။
အခန့်သုံး - Would you be able to deliver the report by tomorrow? (သင် မနက်ဖြန်မှာ အစီရင်ခံစာတင်ပေးနိုင်မလားဗျာ)
အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you deliver the report by tomorrow? (ဆိုလိုရင်း မှာအထက်ပါ ဝါကျနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်)
အခန့်သုံး - Could you ask David to come to the meeting? (David ကို အစည်းအဝေးတက်ဖို့ လာခိုင်းပေးပါလား)
အနည်းငယ် ရုံးဆန်တဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you ask David to come to the meeting? (ဆိုလိုရင်း မှာအထက်ပါ ဝါကျနှင့် တူတူပင်ဖြစ်သည်)
မေးခွန်းများ - Questions
ရုံးသုံး၊ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာအီးမေးလ်တွေမှာ တိုက်ရိုက်မေးခွန်း direct questions တွေထက် သွယ်ဝိုက်မေးခွန်း indirect questions တွေကိုသာအသုံးများပါတယ်။
အခန့်သုံး - I wonder if you would like to join us for dinner on Tuesday. (အင်္ဂါနေ့မှာ သင်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူ ညစာစားနိုင်မလား သိချင်ပါတယ်)
အရပ်သုံး - Do you want to join us for dinner on Tuesday? (အင်္ဂါနေ့မှာ ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ညစာစားနိုင်မလားဗျ)
အခန့်သုံး - Could you see if the components have been ordered yet? (စက်အစိတ်အပိုင်းတွေ မှာပြီးပြီလားဆိုတာကို တစ်ချက်လောက်စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါလား)
အရပ်သုံး - Have the components been ordered yet? (စက်အစိတ်အပိုင်းတွေ မှာပြီးပြီလားဗျ)
ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်များလုပ်တဲ့အခါမှာလဲ သွယ်ဝိုက်မေးခွန်း indirect question ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အခန့်သုံး - Would you like to see the new prototype? (ပုံစံငယ်ကို သင်ကြည့်လိုပါသလား)
အရပ်သုံး - Do you want to see the new prototype? (ပုံစံငယ်ကို ကြည့်မလားဗျ)
ဝေါဟာရအသုံး - Vocabulary
ရုံးသုံး၊ အခန့်သုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာအီးမေးလ်တွေမှာ အရပ်သုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အီးမေးလ်တွေနဲ့ အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့ ဝေါဟာရအသုံး တွေပါပါတယ်။ အရပ်သုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အီးမေးလ်တွေကတော့ phrasal verb တွေကို လှိုင်လှိုင်သုံးပြီး စကားပြောအတိုင်းနီးပါး ရေးကြပါတယ်။
အခန့်သုံး - I would like to request some assistance. (ကျွန်ုပ်အကူအညီရလိုကြောင်းတောင်းဆိုပါတယ်)
အရပ်သုံး - I’d like to ask for some help. (ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းလိုပါတယ်)
အခန့်သုံး - Once I have received the information from our suppliers, I will reply to Mr Brown’s email. (ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပို့သူများထံမှ သတင်းအချက်အလက်များ ရလျှင်ရခြင်း Mr Brown ၏ အီးမေးလ်အား အကြောင်းပြန်ပါမယ်)
အရပ်သုံး - After I hear back from the suppliers, I’ll get back to Mr Brown. (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပို့သူများထံမှ သတင်းရတာနဲ့ Mr Brown အားအကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောပါမယ်)
တချို့အသုံးတွေမှာ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း အခန့်သုံး၊ အရပ်သုံး သိသိသာသာ ကွဲပြားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ အီးမေးလ်တစ်စောင်ထဲမှာ အခန့်သုံး နဲ့ အရပ်သုံးကိုတွဲရေးမိရင်တော့ နားလည်ဖို့မခက်ပေမဲ့ စာ'လှ' မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အခန့်သုံး - Thank you
အခန့်သုံး - I would like to apologize for …
အခန့်သုံး - I would appreciate it if you …
အခန့်သုံး - Would you happen to know … ?
အခန့်သုံး - Unfortunately, I will not be able to …
အခန့်သုံး - I am unable to say whether …
အခန့်သုံး - I would rather not …
အရပ်သုံး - Thanks
အရပ်သုံး - Sorry for …
အရပ်သုံး - Can you … ?
အရပ်သုံး - Do you know … ?
အရပ်သုံး - I can’t …
အရပ်သုံး - I don’t know whether …
အရပ်သုံး - I don’t want to …
ဒီလောက်ဆိုရင် စာဖတ်သူတို့ အခန့်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားအသုံးများထဲမှ တချို့ကို ဖော်ထုတ် ခွဲခြား သုံးစွဲနိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်ဖို့အတွက်ကတော့ အဆက်မပြတ်ရေရှည် လေ့လာရပါမယ်။ ဖြတ်လမ်းမရှိပါဘူး။ သင်တန်းတက်ရန်အချိန်မသေးဘူးဆိုရင် Myanmar Network ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများ ကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့နိုငျငံတှမှော မြားသောအားဖွငျ့ semi-formal လို့ချေါတဲ့ အလှနျယဉျကြေးသောအသုံး နှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးအသုံးကွားက မလြှော့မတငျးလှနျးတဲ့ အချေါအဝျေါ အသုံးအနှုနျးမြားကိုသာ တှငျတှငျသုံးကွပါတယျ။ ခငျမငျပြူငှါ တဲ့ အချေါအဝျေါ အသုံးအနှုနျးမြားကို ယဉျကြေးသောအခနျ့သုံး အသုံးအနှုနျး၊ ဝါကဖြှဲ့စညျးပုံမြား ရောနှောပွီးသုံးတာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျမသိကြှမျးတဲ့ ကိုယျ့အသိုငျးအဝနျးရဲ့ပွငျပမှ လူမြား၊ အခွားကုမ်ပဏီ အဖှဲ့အစညျးမြားကို ဆကျသှယျရေးသားမယျဆိုရငျတော့ ရုံးဆနျဆနျ အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကို သုံးကွပါတယျ။
အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျဘာသာစကားနဲ့ရေးတဲ့ အီးမေးလျတှကေို ကုနျပစ်စညျးမှာယူ/ဝယျယူရာ၊ ကွိုတငျစာရငျးပေးရာ၊ တောငျးပနျရာ အစရှိတဲ့ အခွအေနတှေမှော သုံးကွပွီး ကုမ်ပဏီ အဖှဲ့အစညျးကွီးတခြို့မှာတော့ မိမိရဲ့ အထကျကဖွဈစေ အောကျကဖွဈစေ ရာထူးအဆငျ့ကှဲတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ (colleague လို့အင်ျဂလိပျလိုချေါပါတယျ) မြားထံအီးမေးလျပေးပို့ရာမှာ အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျစကားသုံးကွပါတယျ။
အောကျပါလမျးညှနျခကျြမြားက သငျ့ကို အခနျ့သုံးအင်ျဂလိပျစကားအသုံးမြားထဲမှ တခြို့ကို ဖျောထုတျ ခှဲခွား သုံးစှဲနိုငျစမှောဖွဈပါတယျ။
အီးမေးလျအဖှငျ့ နဲ့ အပိတျ - Openings and closings
ပုံမှနျသုံးနကြေ အီးမေးလျအဖှငျ့ နဲ့ အပိတျတှကေို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ စာရေးသူက အခနျ့သုံး သုံးထား မထားကို ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ Dear .... အစရှိတဲ့ နှုတျခှနျးဆကျစကားအပွီးမှာ opening sentences လို့ချေါတဲ့ အီးမေးလျအဖှငျ့ဝါကြ လာပါတယျ။ အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျဘာသာစကားကိုသုံးထားတဲ့ အီးမေးလျအဖှငျ့ဝါကြ တခြို့ကတော့ -
• I hope that all is well with you. (သငျအားလုံးအဆငျပွနေသေညျဟု မြှျောလငျ့ပါသညျ)
• I was just emailing to request some assistance. (အကူအညီတခြို့တောငျးခံရနျ ကြှနျုပျ အီးမေးလျပေးပို့ခွငျးဖွဈသညျ) (ပိုမိုယဉျကြေးသညျ့ဝါကဖြွဈစရေနျ past continuous tense ကိုသုံးထားသညျကို သတိပွုမိပါသလား)
• Thank you for your email of 12 March. (သငျ မတျလ ၁၂ ရကျနတှေ့ငျပို့လိုကျသော အီးမေးလျအတှကျ ကြေးဇူးတငျပါသညျ)
အထကျဖျောပွပါ အီးမေးလျအဖှငျ့မြားကို အစိုးရ နှငျ့ လူပုဂ်ဂိုလျမြားကွားရေးတဲ့ အလှနျအလုပျသဘောဆနျတဲ့ အီးမေးလျတှမှောမသုံးပါဘူး။ အကွှေးတောငျးတဲ့စာလိုမြိုးတှမှောလဲ မသုံးကွပါဘူး။
အတိုသုံးမြား - Contractions
အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျဘာသာအီးမေးလျတှမှော I’m, he’d, you’ll စတဲ့ အတိုသုံးမြားကိုမသုံးပါဘူး။
အခနျ့သုံး - I am writing to ask if you have seen the news from Mr Dalton. (Mr Dalton ထံမှသတငျးကို သငျမွငျပွီးပါသလား သိလို၍ ကြှနျုပျ စာပို့ခွငျးဖွဈသညျ)
အနညျးငယျ ရုံးဆနျတဲ့အသုံး (semi-formal)/ အရပျသုံး - I’m writing to ask if you’ve seen the news from Jo. (ဆိုလိုရငျး မှာအထကျပါ ဝါကနြှငျ့ တူတူပငျဖွဈသညျ)
ဖွဈနိုငျခွရှေိခွငျး၊ခှငျ့ပွုခွငျး စသညျကိုပွသောကွိယာမြား - Modal verbs
ယဉျကြေးစှာတောငျးဆိုခွငျး နဲ့ ညှနျကွားခွငျးတို့အတှကျ would ၊ could အစရှိတဲ့ modal verb တှကေိုသုံးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရငျးနှီးစှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသုံးရာမှာနဲ့ အနညျးငယျ ရုံးဆနျတဲ့အသုံးတှမှောလဲ ဖွဈနိုငျခွရှေိခွငျး၊ခှငျ့ပွုခွငျး စသညျကိုပွသောကွိယာတှကေို အလားတူသုံးကွပါသေးတယျ။
အခနျ့သုံး - Would you be able to deliver the report by tomorrow? (သငျ မနကျဖွနျမှာ အစီရငျခံစာတငျပေးနိုငျမလားဗြာ)
အနညျးငယျ ရုံးဆနျတဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you deliver the report by tomorrow? (ဆိုလိုရငျး မှာအထကျပါ ဝါကနြှငျ့ တူတူပငျဖွဈသညျ)
အခနျ့သုံး - Could you ask David to come to the meeting? (David ကို အစညျးအဝေးတကျဖို့ လာခိုငျးပေးပါလား)
အနညျးငယျ ရုံးဆနျတဲ့အသုံး (semi-formal) - Can you ask David to come to the meeting? (ဆိုလိုရငျး မှာအထကျပါ ဝါကနြှငျ့ တူတူပငျဖွဈသညျ)
မေးခှနျးမြား - Questions
ရုံးသုံး၊ အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျဘာသာအီးမေးလျတှမှော တိုကျရိုကျမေးခှနျး direct questions တှထေကျ သှယျဝိုကျမေးခှနျး indirect questions တှကေိုသာအသုံးမြားပါတယျ။
အခနျ့သုံး - I wonder if you would like to join us for dinner on Tuesday. (အင်ျဂါနမှေ့ာ သငျကြှနျုပျတို့နဲ့အတူ ညစာစားနိုငျမလား သိခငျြပါတယျ)
အရပျသုံး - Do you want to join us for dinner on Tuesday? (အင်ျဂါနမှေ့ာ ခငျဗြားကြှနျတျောတို့နဲ့အတူ ညစာစားနိုငျမလားဗြ)
အခနျ့သုံး - Could you see if the components have been ordered yet? (စကျအစိတျအပိုငျးတှေ မှာပွီးပွီလားဆိုတာကို တဈခကျြလောကျစဈဆေးပေးနိုငျပါလား)
အရပျသုံး - Have the components been ordered yet? (စကျအစိတျအပိုငျးတှေ မှာပွီးပွီလားဗြ)
ယဉျကြေးတဲ့ ကမျးလှမျးခကျြမြားလုပျတဲ့အခါမှာလဲ သှယျဝိုကျမေးခှနျး indirect question ကို သုံးလရှေိ့ပါတယျ။
အခနျ့သုံး - Would you like to see the new prototype? (ပုံစံငယျကို သငျကွညျ့လိုပါသလား)
အရပျသုံး - Do you want to see the new prototype? (ပုံစံငယျကို ကွညျ့မလားဗြ)
ဝေါဟာရအသုံး - Vocabulary
ရုံးသုံး၊ အခနျ့သုံး အင်ျဂလိပျဘာသာအီးမေးလျတှမှော အရပျသုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အီးမေးလျတှနေဲ့ အနညျးငယျကှဲပွားတဲ့ ဝေါဟာရအသုံး တှပေါပါတယျ။ အရပျသုံး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အီးမေးလျတှကေတော့ phrasal verb တှကေို လှိုငျလှိုငျသုံးပွီး စကားပွောအတိုငျးနီးပါး ရေးကွပါတယျ။
အခနျ့သုံး - I would like to request some assistance. (ကြှနျုပျအကူအညီရလိုကွောငျးတောငျးဆိုပါတယျ)
အရပျသုံး - I’d like to ask for some help. (ကြှနျတျောအကူအညီတောငျးလိုပါတယျ)
အခနျ့သုံး - Once I have received the information from our suppliers, I will reply to Mr Brown’s email. (ကြှနျုပျ၏ကုနျပို့သူမြားထံမှ သတငျးအခကျြအလကျမြား ရလြှငျရခွငျး Mr Brown ၏ အီးမေးလျအား အကွောငျးပွနျပါမယျ)
အရပျသုံး - After I hear back from the suppliers, I’ll get back to Mr Brown. (ကြှနျတျောတို့ရဲ့ကုနျပို့သူမြားထံမှ သတငျးရတာနဲ့ Mr Brown အားအကြိုးအကွောငျးပွနျပွောပါမယျ)
တခြို့အသုံးတှမှော အောကျမှာပွထားတဲ့အတိုငျး အခနျ့သုံး၊ အရပျသုံး သိသိသာသာ ကှဲပွားတာလေးတှရှေိပါတယျ။ အီးမေးလျတဈစောငျထဲမှာ အခနျ့သုံး နဲ့ အရပျသုံးကိုတှဲရေးမိရငျတော့ နားလညျဖို့မခကျပမေဲ့ စာ'လှ' မှာမဟုတျပါဘူး။
အခနျ့သုံး - Thank you
အခနျ့သုံး - I would like to apologize for …
အခနျ့သုံး - I would appreciate it if you …
အခနျ့သုံး - Would you happen to know … ?
အခနျ့သုံး - Unfortunately, I will not be able to …
အခနျ့သုံး - I am unable to say whether …
အခနျ့သုံး - I would rather not …
အရပျသုံး - Thanks
အရပျသုံး - Sorry for …
အရပျသုံး - Can you … ?
အရပျသုံး - Do you know … ?
အရပျသုံး - I can’t …
အရပျသုံး - I don’t know whether …
အရပျသုံး - I don’t want to …
ဒီလောကျဆိုရငျ စာဖတျသူတို့ အခနျ့သုံးအင်ျဂလိပျစကားအသုံးမြားထဲမှ တခြို့ကို ဖျောထုတျ ခှဲခွား သုံးစှဲနိုငျပွီလို့ ထငျပါတယျ။ ကြှမျးကငျြဖို့အတှကျကတော့ အဆကျမပွတျရရှေညျ လလေ့ာရပါမယျ။ ဖွတျလမျးမရှိပါဘူး။ သငျတနျးတကျရနျအခြိနျမသေးဘူးဆိုရငျ Myanmar Network ရဲ့ အင်ျဂလိပျစာသငျခနျးစာမြား ကို ဆကျလကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by Than Than Oo on January 10, 2016 at 10:08
Permalink Reply by tineicho on January 10, 2016 at 20:42
Permalink Reply by JOHN KO KO on January 11, 2016 at 0:11
Permalink Reply by Chaw Su Aung on January 12, 2016 at 9:12
Love to learn more detail as much as you can. Thanks.
Permalink Reply by khin htay myint on January 12, 2016 at 12:35
Permalink Reply by Mya Thida on January 12, 2016 at 13:27
Permalink Reply by Linn Moe Khin on January 14, 2016 at 10:41
I want to learning more and more.
Permalink Reply by Tin Zar Lin Ko on January 14, 2016 at 16:16
I was very lucky today because it was so long time that I had searched the post like that.
Permalink Reply by Zar Ma Ni on January 15, 2016 at 11:42
Permalink Reply by Ohn Mar Soe on January 18, 2016 at 5:12
Permalink Reply by Myotay Za on January 18, 2016 at 16:22
Permalink Reply by Htet Ko Ko Aung on January 20, 2016 at 16:07